qalabixiye, Nelly Furtado, soo saaraha, lyricist, heesaha
Nelly Kim Furtado(* 2 Diisembar 1978, Victoria, Kanada) waa fanaanad Canadian ah, heesaha heesaha, muusigga, muyuusiga muusikada ah iyo jilayaasha jilicsan. 2000 waxay ku guuleysatay guusheedii ugu horreysay ee ay la gasho albaabkaYaa, Nelly!, taas oo iyadu heshay abaalmarinta abaalmarinta Grammy Award u mahadcelisey heesahaWaxaan u eg yahay shimbir. Ka dib markii ay dhalatay gabadheeda 2002, waxay ku soo noqotay goobta muusiga oo albaab ahFolklore, halkaas oo dareenka ugu weyni uu kiciyay midda kaliyaFors(badanaa qoraa si qalad ahCiid), taas oo ahayd heesta rasmiga ah ee kubadda cagta Yurub ee 2004 ee Portugal. XNEX Xagaaga ayaa sii daayay albaabka saddexaad ee loogu yeerodabacsan, kuwaas oo sidoo kale hits aad u guulaystayManeateramaDibad bax.
Waxa loo yaqaanaa tijaabinta qalabka muusikada ee kala duwan, taas oo uu ku soo bandhigayo muusikada kala duwan iyo isku dhafida qaababka iyo dhaqamada kala duwan ee albaabadiisa.
Waxay ku dhalatay Fiktooriya waxayna leedahay saddex carruur ah. Carruurtu waxay ku noolaayeen Victoria (British Columbia, Canada). Waalidiinteeda Maria Manuela iyo Antonio Jose Furtado ayaa ka yimid Azores (Portugal). Magaca ayaa la siiyay jimicsiga reer galbeedka Nelli Kim.
Waalidiinteeda waxay ka soo haajireen Portugal ilaa Kanada dhammaadka 60. sano. Waalidiinta, oo ay weheliyaan walaalahooda, waxay xiriir la leeyihiin labada dhaqan, sidaas darteed waxay sidoo kale yihiin Portuguese.
Tani waxay isku dhafan tahay dhaqamada tan iyo carruurnimadeedu ay saameysey, heesaha ugu horreeya ee ay ka kooban tahay waxay ahaayeen kuwo labadaba ah. Dabadeed waxay bilowday inay bartaan Isbaanishka iyo Hindi dugsiga.
Tan iyo markii ay waalidkeed aysan haysan lacag badan, waxay tagtay shaqada sanadihii yaraa, iyada oo hooyadeed la shaqaysay gabadh, ka dibna waxaa la siiyay lataliye. Sida ay mar dambe qirtay waraysiga, tani waxay gacan ka gaysatay sidii ay u heli lahayd nafteeda runta ah oo ay ku dhejinayso wadada wanaagsan.
Waxay markii ugu horreysay ee kiniisaddu la muuqatay hooyadeed intii lagu jiray xafladahamaalinta Portugal. Markay ahayd sagaal, waxay bilaabeen inay bartaan inay ciyaaraan trombone iyo ukulele, ka dibna guitar iyo furaha.
Marka laba iyo toban, waxay bilaabay inay ciyaarto kooxdeeda koowaad. Waxay ku heesayeen af ​​Portugal, kadibna Nelly ayaa qoray sheekooyinka. Sanadihii dambe, DJs iyo rappers kala duwan ayaa bilaabay inay saameyn ku. Intii lagu guda jiray booqashada Toronto ee 1996, waxay la kulantay koox fanaaniin ah oo hip-hop ahKusoo biir kooxdaoo tani waxay saameyn ku yeelatay inta badan. XNEX XIDIGAHA LA ISLA OGOLAADAY EE QOYSKANelstarsi ay uNewkirkoo ay wada shaqeeyaan. Dhawr sano ka dib, dhammaantood waxay noqdeen kuwo madaxbannaan, Nelly waxay diiwaangeliyeen dhowr cajalado ah oo ay ku bilaabatay inay dhaafto muusigga muusikada, kuwaas oo intooda badan ay u muuqatay in ay DreamWorks u muuqato.
Si ay uga dhigto albaabka ugu horeeya, Gerald Eaton iyo Brian Westa, oo ka caawisay inay sii daayaan albumkii bishii Oktoobar, kuna martiqaaday 2000. Guusha ugu weyn ee albaabkan wuxuu ahaa saddexda qof ee ugu horeeya ee loo magacaabayWaxaan u eg yahay shimbir,Demi iftiinkasi ay u... Raadiyaha (Xusuusta Maalmaha). 2002 ayaa ku guuleystay abaalmarinta 4 ee Abaalmarinta Grammy Prestigious, ugu danbeyntii waxay heshay mid naxwe gaaban ah iyo heesta haweenka ugu fiican ee heestaWaxaan u eg yahay shimbir. Waxaa intaa dheer, naqdiyeyaasha Furtado ayaa lagu amaanay sida isku dhafka iyo dhawaaqyada kala duwan. Wargeyska prestigiousGadaalWaxa uu ku sharxay albaabku inuu yahay "adeable iyo cusub". Gabayadii guuleysey waxay ku dhammeysatay safar guul leh oo ay ku dhamaysatay Moby.
Ka hor inta aysan sii deynin albumkeeda labaad, waxay dhashay ilmo yar oo ay dhashay, gabadh magaceeda la odhan jiray Nevis. Folklor album ayaa la sii daayay bishii Nofeembar 2003 iyo heeso badan ayaa lagu qoray xusuusta caruurnimada xannaanada, mid ka mid ah heesaha,Riyooyinka Carruurta, iyada oo sidoo kale gabdhaheeda yar yar. Inta badan dhagaystayaashu waxay heleen heesta loo yaqaanFors, oo ku hadlaya afkiisa hooyo ee Portuguese waxana uu noqday heesta rasmiga ah ee 2004 European Football Championship. Heesta ayaa lagu heestay ka hor 4. July 2004 ee Lisbon. Sheekooyinka kale ee muhiimka ah ayaa noqday balladIsku dayama tijaaboAwood la'aan (sheeg waxa aad rabto).
Hase yeeshee, albumku ma ahayn mid guuleystay markii ugu horaysay, dambiile wuxuu ku dhacay gurmadka daabacaada oo yar yar oo dacaayad ah, sidaa daraadeed dhammaadka 2005 waxay ka tagtay DreamWorks Geffen Records.
Albaabkeeda saddexaad ayaa la sii daayay bishii June, 2006, waxayna ku guulaysatay inay sameyso midda koowaadYaa, Nelly. Fanaanku wuxuu la shaqeeyay farshaxan farshaxan oo caan ah sida Timbaland iyo Juanes. Oo iyadu waxay u suurtagashay in ay taas ku sameeyaan si kasta oo artist. Yurub, waxay soo saartay hees la yiraahdoManeatermarkaa Mareykanka waa gabay la magac baxayDibad bax, labadaba hal todobaad ayaa hogaaminayay shaxda sharafta leh ee Britain iyo Maraykanka.
Yaa, Nelly!(oo la sii daayay 24 Oktoobar 2000, iibinta dunida oo dhan - 7 million)
Folklore(25 November 2003, 2 Malaayiin)
dabacsan(9 Juun 2006)
Qorshahayga(14 September 2009)
Ugu Fiican Nelly Furtado(15 November 2010)
Ruuxa aan la dabooli karin(17 September 2012)
Riditaanka(31 Maarso 2017)
DVD DVD ah oo yar(2007)
Waxaan u eg yahay shimbir
... Raadiyaha (Xusuusta Maalmaha)
Awood la'aan (sheeg waxa aad rabto)
Grass waa Cagaar
Dhammaan Wanaagsan (Kaalay Dhamaad)
U sheeg Xaq
Sii Ii (Iimaan Timbaland, Justin Timberlake)
Ruux aan la dabaji karin
Qalabyada Jilicsan (oo ku jira James Morrison)
1: Maneater (hees, Nelly Furtado)
3: Habeenku waa Young
6: Waxaan ahay sida Shimbir
7: ... Raadiyaha (Xusuusnow Maalmaha)
8: Waa maxay, Man!
9: U sheeg Xaq
11: Saaxiibadeyda (Song, Timbaland)
14: Demi iftiinka
16: Sheeg la'aan
19: Isku day
20: Wax walba oo wanaagsan (Kaalay ugu dambeyn)
22: Barnaamijka Eska Music Awards 2013
24: Awood la'aan (sheeg waxa aad rabto)
26: Xisbiga cusubi wuxuu bilaabay (mar kale)
27: Grass waa Cagaar
28: Qiimaha Shakiga
29: Ku Dhaqaaq Urger
30: Soo saaraha muusikada
31: Hal daqiiqo Nin
32: Awood la'aan
33: Qofna Jacayl
34: Sawir quruxsan
42: Liiska muusikada R & B
43: Bandhiga Dayrta
44: Muusikada lagu duubay NZ
46: Bandhiga Sanremo
47: Qalab la'aan
48: 2. Diseembar
Nelly Furtado Kim (* 2 1978. December, Victoria, Canada) waa gabayaa ahaa Canadian, Xisbi, instrumentalist, rikoorka soo saare, iyo aktarada marmar. Guusha ugu horeysay weyn wuxuu ahaa in 2000 la heestii Whoa, Nelly!, Kaas oo lagu abaalmariyey Grammy Award mahad qiimaha heesta Waxaan ahay Like Bird ah. dhalashada gabadheeda in 2002 Ka dib markii uu halkan ku soo laabtay inuu sii joogo goobta la hiddaha ah album, halkaas oo Ujeeda ugu weyn ee toosay hal Forca (inta badan si qaldan qoran Forca), kaas oo ahaa heesta rasmiga ah ee European Football Championship ee Portugal 2004. Xagaagii, 2006 ayaa sii daatay albaabka saddexaad, Loose, taas oo ku taalla hufnaanta Maneater ama hits-ka lagu guuleysto.
Maneater waa sheeko by Nelly Furtado ka soo album saddexaad Loose. Sheekada waxaa la qoray Timbaland, oo sidoo kale soo saartay. Singl wuxuu marka hore u baxay Europe, halkaas oo Furtado uu noqday heesaha ugu caansan tan iyo tan.
Yaa, Nelly! waa albaabka ugu horeeya ee heesaha Canadian Nelly Furtado. Albaabka waxaa la sii daayay 24. Oktoobar 2000 oo ay ku jiraan hits aad u weyn sida aan jeclahay shimbir ama aan iftiimiyo iftiinka. Sheekada ayaan u ahay sida Bird, waxay xitaa heshay Abaalmarinta Abaalmarinta Grammy ee qaybta Heerka Sare ee ugu wanaagsan.
Habeenku waa gabay ay heestaan ​​heesaha Canadian pop-songwriter Nelly Furtado. Sheekadu waxay ka timid sheekadii shanaad ee studio The Best of Nelly Furtado. Waxsoosaarka ayaa waxaa sameeyay Salaam Remi iyo Stunk Krunk-A-Delic.
Nelli Vladimirovna Kim (Нелли Владимировна Ким,. * 29 1957 July Surab) waa tababare jimicsi hore ee Soviet, shanta jeer horyaalka Olympic iyo shanta jeer světa.Život horyaalka waa aabbe Korean iyo hooyadii ka soo jeedo Tatar. Dhashay kuna soo barbaaray Tajikistan, Kazakhstan, Shymkent, halkaas oo sagaal sano, loo tababaray kooxda Spartak. ilmaha loo aqoonsaday mid tayo weyn, sannaddii 1973 ku guuleystay horyaalka ee USSR ku gudban ka midka ah iyo ayaa lagu casuumay si ay xulka qaranka oo ku guuleysatay horyaalka Cup 1974 World tartankaan kooxda. At Olympics ee Montreal 1976 diriray xafiiltanka la Romanian Nadia Comaneci, kan dhintay in-ku wareegsan, laakiin waxay ahayd xubin ka mid ah kooxda ku guuleysatay oo ku guuleystay dahab shaqsi ee wareegga iyo dabaqa jimicsi, halkaas oo ay jimicsi, mahad u xarrago iyo femininity hadalka, waxa uu ku guuleystay ugu horeysay taariikhda Olympic lambarka buuxa toban dhibcood. At guriga Olympics ee Moscow 1980 difaacay ay guusha tartanka kooxda iyo jimicsiga dabaqa. In-agagaarka ahaa guusha ugu weyn World Champion in 1979 iyo kaalinta labaad ee koobka aduunka ee isla sanadkaas.
'Plan Mi waa tii ugu horaysay celošpanělské album Portuguese-Canadian oo gabayaa-Xisbi Nelly Furtado, halka iyada album studio afaraad. 15 ayaa la sii daayay. September, December 2009 2008.ProdukceV daabacay maqaal El Diario La Prensa in Furtado ayaa qorshaynaysa in ay toogtaan Ingiriisi iyo Isbaanish songs ay album cusub oo soo socda, taas oo la filayo inay ka soo baxaan mararka qaar inta lagu guda jiro May inay August. Horraantii bishii March, ka dibna xaday qoro of heesta "TGS Yaqaana", taas oo sheegtay in ay mas'uul ka ah oo keliya Furtado waa. Furtado 4 ayaa daabacay jawaabta dhacdadan. March 2009 uu war MySpace in song ma aha kuweed ah iyo in kaliya labo albums cusub - mid ka mid ah Isbaanish iyo mid ka mid ah reer Portugal. Bishii Juun, 2009 waxay ku dhawaaqday magaca cusub ee "Mi Plan" iyo magaca ugu horeeyay "Manos al Aire".
Waxaan ahay Like Bird ah (Waxaan ahay sida shimbir) waa hal labaad ka album ugu horeeyay Nelly Furtado ee Whoa, Nelly! .Waxaa wareysi Nelly qirtay in tani ay tahay iyada song jecel yahay, maxaa yeelay, waa mid fudud oo svobodná.I'm Like a Bird waa mid ka mid ah kali ugu guulaha badan ee sanadka 2001 ah, oo dhan gooldhalinta music waaweyn galay TOP 10.Díky this song, Nelly Furtado qaatay abaalmarinta Grammy 2002 haweenka ugu fiican píseň.Videoklip song la faray by Francis Lawrence.Tracklist "waxaan ahay sida a Bird "(version LP) 'Party (Reprise)" (Non-LP version) "waxaan Waxaad Dareen", "My Love u koraan sii mool dheer" (LP Non-version) goobta in jeex dunida ka mid ah qoraalka waxaan ahay sida shimbir, kaliya ee aan duuli Away ma oga Xaggee, naftayda waxaa ka, sow ma aan ogi Xaggee gurigeyga waa (iyo ilmaha oo dhan waxaan u baahan tahay inaad ogaato waa) waxaan ahay sida shimbir, kaliya Markaasaan iska duuli ma oga meeh naftayda , Anigu garan maayo Xaggee gurigeyga ayaan u baahanahay isAll inaad ogaataan waa
... On Radio ee (Xusuuso Maalmo) (... On raadiyaha (xusuuso maalmood) waa hal afaraad ka album ugu horeeyay ee Nelly Furtado, oo magiciisa la odhan Whoa, Nelly! In asalka song lagu magacaabo shire on Radio ee (Xusuuso Maalmo), laakiin hadalka shit ayaa laga booday waxaana ugu dambeyntii laga saaray magaca heesta.
Waa nin! (Hey, Rag!) Miyay shanaad ka mid tahay albumkii Whoa, Nelly! Nelly Furtado oo ah heesaha Canadianka. Kaliya waxaa la sii daayay inta badan Jarmalka iyo Boqortooyada Ingiriiska, gabaygan waxaa mar kale soo saaray labada gabadh Gerald Eaton iyo Brian West. Furtado wuxuu ka yiri heesaha: "Waa sheeko aad u badan, laakiin dhagax yar. Dhageysiga demo waxaan haynaa diiwaanka koreographed, laakiin waxay ka dhawaajisay waxoogaa ka duwan sida aan dooneyno. "
Waxaad dhahdaa Waxaa Xaqa (waxay xaq u dhahdaa) waa hees uu ku qoray Nelly Furtado, Timbaland iyo Danja oo noqotay hal afaraad ka album ugu dabacsan, Furtado la sii daayay in 2006.Píseň waxaan sidoo kale u sharaxan abaalmarinta Grammy ah ee category ee dhaddig fiican píseň.InformaceProces gabaygan qorta bilaabay maalintii studio mid, ku dhawaad ​​afar saac oo aroortii ah, marka Timbaland Furtado talinayaa in uu guriga ka tagay maxaa yeelay, waxay ahayd daal. Furtado diiday oo bilaabay in ay meel saxmad ah. Labada saarayaasha si gabayaa ahaa ku daray.
Folklore waa albaabka labaad ee lineerka Canadian Canadian Nelly Furtado oo ay sii daysay 25. Nofeembar 2003. Albaanku wuxuu noqday mid aad u guulaystay, laakiin ma uusan helin caanbaxii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Whoa, Nelly'! Albaabka ayaa sidoo kale waa sheekada loo yaqaan 'Forci', taas oo noqotay heesta rasmiga ah ee kubadda cagta Yurub ee 2004.
Sii Ii waa gabaygii Timbaland, kaas oo ka caawiyey Nelly Furtado iyo Justin Timberlake. Gabaygan wuxuu ka soo jeedaa albaabka uu ku leeyahay albaabka Shock Shock Value waxaana lagu sii daayay 2007, sida ay ku warameyso MediaTraffic, Ku siinta Me waa Songka 10aad ee ugu guulaha badan sanadka 2007. A ayaa loo sharraxay abaalmarinta Grammy ee qaybta ugu fiican ee wada-shaqeynta .BilitaankaArdayda saddexda qoraalladoodu waxay qayb ka yihiin heesaha, chorus waxaa heesta Nelly Furtado. Timbaland ayaa sidoo kale la shaqeynayay labada fanaanood ee albaabadoodii kali ah, sidaa darteedna ugu baaqay inay kaashadaan albaabadooda.
Fuerte waa gabay ay heesto heesaha Canadian pop-songwriter Nelly Furtado. Sheekadu waxay ka timaaddaa sheekada shanaad, Mi Plan, iyo sidoo kale waxa ku jira qaybta remix ee albaabkan. Soo saarey soo saaraha Salaam Remi.
Trynna Finda Way waa kan lixaad iyo kan ugu dambeeya ee uu sameeyay Nelly Furtado oo ka timid albaabkeeda ugu horeeya. Gabaygan ayaa yimid Mexico oo kaliya, Furtado wuxuu ku sharraxay heesadaan si uu miyir qabo, waxaana loo waxyoonay Bítníky ee heesta. Sheekada waxaa ku jira saameyn la ogaan karo oo ah hip hop kaasoo saameyn ku yeeshay dhalinyarada. Waxaan sidoo kale maqli karnaa qalabka dhaqanka Brazil ee berimbau. Trynna Finda Way waxay u muuqatay heesaha filimka filimka 'Princess' waxaananu maqli karnaa filimka Nolosha Dugsiga.
Nelly Furtado, oo ka timid sheekadii ugu horeysay ee yurub, Whoa, Nelly! Dalka Mareykanka, heesta waxay xitaa shanaad, taas oo ahayd meesheedii ugu fiicneyd ilaa 2006, markii ay dhaaftay heesteeda Dib-u-dhac, oo helay kan ugu sareeya ee Billboard Hot 100.
Timothy Z. Mosley (* 10 1971. March Norfolk, Virginia), si fiican u yaqaan hoos magac maldahan u Timbaland waa laxamiistaha American, soo saare iyo heesaa, kuwaas oo in gabayadiisuna blurs farqiga u dhexeeya hip hop, qoob ka music iyo pop. Waxa kale oo uu xubin ka ahaa kooxda Timbaland & Mangoo hip-hop.
Kala sooc la'aan ayaa ah kan kaliya ee Nelly Furtado ay ka soo baxday albaabkeeda saddexaad. Fannaanka ayaa la sii daayay 2006 waana markii ugu horeysay ee uu soo bandhigo qaaradda Ameerika. In Europe wuxuu u baxay sidii Maneater labaad.
Explode waa hal-fanaanad Canadian ah Nelly Furtado oo ka soo jeedo Folklore. Sheekada waxaa loo doortay midka afaraad, waxaana la sii daayay dayrta 2004.Furtado oo ku saabsan heesta "Sheekadu waxay ahayd gabay, waxaan ugu yeeray dhalinyaro burbursan. Markaad tahay qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu wax walba tijaabiyo, waxaad u egtahay tornado. Ka dibna waxaad tahay qof caqli leh, laakiin gudaha gudaha ayaa weli ah naftaada dhalinyarada ah ama waayeelka ah, laakiin mar walba ma muuqato. Explode ayaan ku qoray markii aan tagay capoeira, oo ah fanaankii reer Brazil, oo ahaa tijaabinta dhalinyaradeyda. "
Ereyga "maneater" waxaa laga yaabaa inuu macnaheedu yahay: Maneater (Hall & Oates) - oo ay weheliso Hall & Oates
Isku day inaad tahay hal Nelly Furtado oo ka timid albaabkeeda labaad ee studio oo loogu yeero Folklore. Sheekada waxaa soo saaray Brian West oo la sii daayay sidii mid labaad oo ka timid albaabkii ugu horeeyay ee 2004. Heesta waxaa sidoo kale lagu duubay laba taxane ah Smallville iyo Joan ee Arcadia.
Dhamaan Wanaagsan (Dhameysta Dhamaadka) waa fanaanad kali ah Nelly Furtado, oo ku qoray Timbaland, Danja iyo Chris Martin. Hal ayaa lagu sii daayay 2006 wuxuuna ahaa kii ugu horreeyay ee jaantuska Czech.
"Hot N 'Fun" waa heesaha kooxda hip-hop American-ka ah NERD Heesta ayaa ka timid fanaankiisa afaraad ee Nothing. Waxaa soo saaray soo saaraha Neptunes. Gabaygan waxaa lagu caawiyay fannaanka caanka ah ee reer Portugal Nelly Furtado.
Barnaamijka Eska Music Awards 2013 wuxuu ahaa koobkii saddexaad ee Abaalmarinta Musharaxiinta, kaas oo lagu qabtay 3. August 2013 ee Szczecin, Poland. Abaalmarinta ayaa lagu soo bandhigay TVP1, waxaana u dhexeeyay Ada Fijał iyo Krzysztof "Jankes" Jankowski.
Loose waa albaabka saddexaad ee heesaha Canadian Nelly Furtado, oo ay sii daysay 9. Juun 2006. Albaabkaan, Furtado wuxuu inta badan ku shaqeyn jiray Timbaland, oo ay la sheekeysatay laba heeso oo cajiib ah Maneater iyo Promiscuous.
Mana karayaan (waxaad dhahdaa waxa aad rabto) Bezmozný (waxaad dhahdaa waxa aad rabto) waa hal Nelly Furtado ka album labaad, sii daayay hiddaha, taas oo la sii daayay in 2003.Singl soo saaray labo ka mid ah Track & Field iyo guud ahaan helay aad u wanaagsan oo ku saabsan gabaygii yaraa recenze.Furtado uu yiri: " waxaan soo arkay badan oo shows in ay ahaayeen janjeedha kala duwan, oo dhaqsiba waxaa ahaa tub ah. Wax walba waxay bilaabeen inay ku haboonaadaan codka iyo garaaca. Tani waxay ahayd waxyiga. Qoraalkani waa nolosheena qalafsan ee aan ku noolahay bulshadeena, laakiin sidoo kale waxaa jira dareen ka yimaada adduunkeena adag. "
Fors waa midda saddexaad ee ay wadaagaan Nelly Furtado oo ka soo jeeda sheekada labaad ee Folklore. Sheekada waxaa lagu heesaa Ingiriis oo leh chorus in Portuguese ah. Sheekada waxaa soo saaray Track & Field oo aad u caan ah. La sii daayayna waxaa la sii qorsheeyay June 2004, waxaana heesaa heesta rasmiga rasmiga ah ee 2004 European Football Championship oo lagu qabtay Portugal.
Xisbiga kaliya ee bilaabay (Mar labaad) ayaa ah kii ugu horreeyay ee Nelly Furtado, oo u muuqday heesaha filimka Brokedown Palace. Heesta ayaa la sii daayay 2000, laba bilood ka hor sii deynta albumkii Whoa, Nelly!
Grass The Ma Green (Grass waa ku cagaar) waa hal ugu dambeeyay ee ka hiddo heestii Fanaanada Canadian Nelly Furtado, oo waxaa la qoray oo soo saaray by Mike Elizondo.The Grass Ma Green waa guud ahaan hal shanaad ka album ah, laakiin mid ka mid ah oo kaliya oo laga duubay video. Sidaa darted, waxaa la daabacay oo keliya waddamo kooban, oo leh jimicsi wanaagsan oo Jarmalka ah.
Shoogga Value (oo sidoo kale Timbaland bandhigidda Shoogga Value) waa album studio labaad iyo album shanaad guud ahaan, by record soo saare iyo heesaa Timbaland. Sidoo kale waa album Timbaland ugu horeysay ee, kaas oo la sii daayey on calaamad Records Interscope. album The marti tiro ka mid ah fannaaniin caan ah sida Justin Timberlake, casuus The, dhaca Out Boy, Keri Hilson, Nelly Furtado, Missy Elliott, 50 Cent, Dr. Dre, OneRepublic, Elton John, Magoo iyo Nicole Scherzinger.
Hel Uur xukun jecel On hip-hop hal qoray heesaa American Missy Elliott iyo Timbaland soo saaray iyada album studio saddexaad Miss E ... Sidaas Addictive.Byl sii daayay sida hogaanka hal ka album ah, gaartay 7 boor Hot 100.místa oo noqday shanaad ee ugu guulaha badan hal taariikhda . hal Missyina goobta gaaray ugu fiican England iyo afraad iyo ku hadhay ee Top 20 lix todobaad. Nelly Furtado ayaa ka muuqday remix heesaha. In video waxay u muuqdaan sida guests Nate Dogg, Nicole Wray, Ludacris, Busta Hikaadintu, Spliff Star, Eve, Master P, Romeo, Timbaland, Ja Rule iyo Qabooji LL J.
soo saare Music waa qofka mas'uulka ka ah guusha, wax lagu qoro, wax soo saarka iyo waxqabadka Fasiraadda nahrávky.Úkolem muusikada ah soo saarayaasha noocan oo kale ah jeZpůsob doorashada music ah interpretaVýběr fannaaniin kale oo looga baahan yahay hirgelinta dílaDohled badan injineerada nahrávkyVolí, iskaashiga (kii la) Caawimada abuuraya albums ama singlůV music elektaroonik ah oo pop music, soo saare ka qaadataa daryeelka ee la isku qasin, heshiis muusikada, Barashada, iyo Halabuurka laftiisa (iyo hirgelintiisa). Muusikada qowlka, doorka muusiga muusiga wuxuu u dhigmaa mid u dhiganta agaasimaha muusikada.
Man One Daqiiqo Hip-hop-hal daayay in heesaa 2001 American Missy Elliott.V version asalka muuqan Ludacris iyo Trina, laakiin heestii Miss E ... Sidaas qabatimo Ludacris marti kaliya. Song by Missy Elliott, Ludacris iyo Trina oo soo saaray Timbaland, iyo remix Missy Big Haanta Elliott.V muuqataa Jay-Z iyo sidoo kale on album ee Miss E ... Sidaas Addictive.Singl kaalinta on the 15 boor Hot 100.místě oo noqday iyada oo ah kan labaad ee 10 oo ku yaala England halkaas oo lagu meeleeyay 10. Missy Elliott Hel Uur xukun jecel muujiyeen Isaga iyo One Man Daqiiqo, oo ay la socdaan Nelly Furtado, Ludacris iyo Trina ee MTV Video Music Awards 2001 ka go'dayna ah in gabayaa ahaa murugo leh dhintay aaliyah sida. In 2002 video hal la sharaxan 6 MTV Video Music Awards, at Hop ah Video Best Hip, direkce Best, edit Best, Direction Art Best, Best Saamaynta gaarka ah iyo Best shineemada.
Mana karayaan noqon kara: yaraa (qoslo) - publisher taxane maadda la yaabin waxyaabaha lagu qoslo ka 2004Powerless (taxane) - taxane telefishan American ah 2017Powerless (song, Linkin Park) - song of guutadii American Linkin Park ka 2012Powerless (song Rudimental) - Song of British kooxda Rudimental ee 2014
Qof si Love macnaheedu kartaa horyaalka: Qof si Love (song Queen), song of sanadka 1976 heestii A Maalinta at RacesSomebody si jeclaada (song, Jefferson Diyaaradeed), song of sanadka 1967 heestii Surrealistic PillowSomebody si Love (song Nelly Furtado), track bonus on LooseSomebody album ah si Love (song Leighton Meester), gabay la sii daayay 2009, wada gabyi la Robin ThickemSomebody si Love (song, Justin Bieber), hal of 2010 sanadka ku jira on album ah My World 2.0Somebody si Love (film, 1994), riwaayad Maraykan ah oo agaasime ka ah Rockefeller from 1994
Picture Perfect laga yaabaa inay tilmaamayso: In filim: Picture Perfect (film, 1995) - Southhampton bilowday ciyaaray by Dave Thomas iyo Maryan Page KellerPicture Perfect (film, 1997) - kulmeen Southhampton ciyaar ka taataabtay, ciyaaro Jennifer Aniston iyo suugaanta Jay MohrV: Picture Perfect (novel ) - sheeko ka mid ah sanadkii la soo 1995 qoray Jodi PicoultPicture Perfect - novel ah waxyiga music taxane telefishan ČarodějkyV ah: Picture Perfect - album of AvenuePicture Perfect kasta - album of SoilPicture Perfect - album of biyaaniiste Ahmad JamalaPicture Perfect - album ee Sky "Picture Perfect" - Fanaanada song Angela Via "Picture Perfect" - song ka album ah Sound ee aargud heesaa Chamillionaire "Picture Perfect" - song ka album ah Exclusive by Chris Brown ee "Picture Perfect!" - song ka album ah Cupcakes dhadhamiya Like Rabshadaha by Jeffree Star "Picture Perfect" - gabay ka soo jeeda dunidii aduunka by Michael Smith
"Maneater" waa indhaha midab-yare / Calaamad cusub oo Wave oo ah labada lamaane ee Hall & Oates on album H2O iyo hal kaliya daabacay RCA Records ee 1982. Sheekadu waxay ka badan tahay afar daqiiqo waxaana qora Sara Allen, Daryl Hall iyo John Oates. Sheekadu waxay heshay #1 Billboard Hot 100 oo ku dhufatay halka ay ka timid 18. December 1982 ilaa 8. Janaayo 1983.
DIMA Bilan (Дима Билан ee Ruush), oo magaciisa dhabta ah Viktor Belan Nikolayevich (Ruush Виктор Николаевич Белан) waa karačejského ah oo gabayaa pop Ruush iyo Ruush původu.Narodil la 24. December 1981 in Ust-Džegutě in Karachay-Cherkessia in USSR ah (hadda Russia) .Dima wakiil Russia ee Eurovision Song Contest ee 2006 la gabaygii Marna ha Waxaad Tag, markii uu kaalinta labaad. Laba sano ka dib, 24. May 2008 ayaa ku guuleystay Grand Prix Eurovision 2008, hees ku Rumeeya. Edvin Marton iyo Yevgeniy Pljuschenko ayaa sidoo kale ka caawiyay inuu ku guuleysto.
TWiiNS oo gabayaa ahaa, akhriye, aktarada oo mataano muusikada Daniela iyo Veronika Nízlové (15. 1986 May Hronský Beňadik Czechoslovakia) .www.twiinsmusic.euKariéraZpívat bilaabay in carruurnimada. Mid ka mid ah heesaha ugu horeeya ayaa ahaa "Wiilasha" by heesaha Talyaaniga Sabrina Selermo [source?]. Waxay soo saareen 4 CD, taas oo lagu siiyay saddex dahab ah iyo hal album oo ah. Afar sano, TV-ga "Hitbox" ee TV Markiza. In mucjisada muusikada waxay ciyaarayeen doorka Tereza. Bishii Abriil 2008 waxa ay gashay heesta "Ma Garanayo", cajalad fiidiyoo ah ayaa lagu toogtay Miami. song Tani waa iskaashiga la soo saare American Jimmy Douglesem, oo sidoo kale la soo shaqeeyay Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Duran Duran iyo kuwo kale oo badan. [Source?]
Dua Lipa (22. 1995 August London, United Kingdom) waa gabayaa Ingiriisi, Xisbi iyo modelka.Narodila la 22. Agoosto 1995 ee magaalada London ee qowmiyadda Kosovo ee reer Albaaniyiinta ah ee ka tegey Pristina ee 90. sano 20. qarnigii. Waxay ka qayb gashay Dugsiga Masraxa ee Sylvia Young ka hor inta aysan u guurin 2008 qoyskeeda Kosovo. 16, waxay ku soo noqotay London si ay u noqoto fanaan. Wax yar ka dib waxay bilowday inay ka shaqayso qaab. Aabaheed Dukagjin Lipa waa muusikada dhagaxa ah ee Kosovo-Albanian. In ka sano 14 uu bilaabay samaynta daboolida of songs ah fanaaniinta ay jecel yihiin sida Christina Aguilera iyo Nelly Furtado, oo iyagiina wuxuu dhex dhigay on YouTube.
Keri Lynn Hilson (* 5 Diisembar 1982 Atlanta, Georgia, USA) waa heesaha American R & B iyo heesta qoraaga la shaqeeya Zone 4 / Mosley Music Group / Records Interscope. Wuxuu qayb ka yahay koox qorayaal iyo soo saarayaasha loo yaqaan "The Clutch".
Mark Paul Oakenfold (* 30 1963. August, Greenhithe, Kent, England), waa soo saare riyooday iyo DJ. Habka sawirada 1987, Bawlos wuxuu jecel yahay muusikada qoob-ka-cayaarka. Saamayn ku music ka Ibiza, Italo caweyska, iyo naf iyo guriga, Paul wuxuu bilaabay inuu wax dhiso, gaar ahaan remixes ka U2, weerarkii u ballaaran, xiray Development, daawo, Snoop Dogg mudalabyada, Si fudud Red, Order New iyo Shamen The, oo ay iskaashanayaan Steve Osbornem hoos magaciisu yahay Perfecto. Qaar badan oo ka mid ah cajaladahaas waxaa sii daayay shirkadda Paul Recordo Records. Markii ugu horeysay, Paul wuxuu ciyaaray kooxo yaryar, laakiin ugu dhakhsaha badan wuxuu ku helay sumcad loogu talagalay DJ DJ. In 1994 abuuray by Paul dhigay laba-saac Mix a muhim u yahay BBC Radio 1. set Tan waxaa loo yaqaan waxa loogu yeero. Goa Mix iyo xataa hadda waa mid ka mid ah ugu doonteen network BBC Radio 1.
Champ-de-Mars waa goob dadweyne oo ku taal Paris oo ku taal 7. inta udhaxeysa Tower Eiffel ee waqooyi-galbeed iyo Etiolaha Militeriga ee koonfur-bari. Goobta jardiinadu waa 24,32 ha.
Tani waa liiska qaar ka mid ah R & B iyo R Modern & B music skupin.Rhythm iyo fanaaniinta bluesR & B (40. Years 50 Years.) Johnny AceLaVern BakerJesse BelvinBrook BentonTiny BradshawCharles BrownRoy BrownRuth BrownRay CharlesArthur CrudupCecil GantRosco GordonWynonie HarrisScreamin 'Jay HawkinsClarence "Frogman" HenryIvory Joe HunterEtta JamesLittle RichardFats DominoLoyd Pricer & B, Doo Wop (50 sano.) The PenguinsThe CadillacsThe Five SatinsThe CloversThe HarptonesThe Five KeysThe CrestsFrankie Lymon & The fanaaniinta TeenagersThe DellsR & B (sano 60.) James BrownWilson PickettJoe TexAretha FranklinSam CookeOtis ReddingThe Funk Brothers (Motown) Ray CharlesThe Bar-KaysThe SupremesBlue-weershe R & B fanaaniinta (xagaaga 60. ~) kuwa dhawrsada BrothersThe RascalsThe AnimalsSteve WinwoodSpencer Davis GroupVan MorrisonThemHall & OatesGrass RootsHamilton, Joe Frank & ReynolsFrankie MillerTina MarrieAlison MoyetJoss Stoner & B fanaaniinta (sano. 70), (sano firfircoon ka 50.) Wilson PickettJoe TexR James Brown dhidibka RoyceThe TrammpsStevie Wonder (firfircoon ka 60. sano), Xumaantu The (firfircoon ka 60. sano) Afar TopsChaka KhanSpinnersKool Jackson & The GangFunkadelicStylisticsThe 5Brothers JohnsonR & B / farshaxan post-caweyska (80. sano) Michael Tilmaamidda JacksonThe SistersShalamarSkyyDeniece WilliamsRay Parker, Jr.Fat Larry ee BandEvelyn "Champagne" KingThe ManhattansD. TrainPrinceThe WhispersTina Turner (firfircoon ka 60 Years.) LakesideThe SOS BandSoučasné R & fanaaniin BR & B - laga bilaabo (Years 80.) Janet JacksonJermaine JacksonKeith SweatFreddy JacksonWhitney HoustonSurfaceMtumeLoose EndsLuther VandrossGeorge ClintonSoul II SoulBobby BrownNew Jack SwingToday (R & B) GuyWreckx-N-EffectKeith SweatBasic BlackJeff ReddBobby BrownJohnny KempMichael JacksonSWVBig Daddy fanaaniinta Moe CaneKool DeeJohnny GillBell BIV DeVoeR & B (90. ~ sano) AaliyahAkonAlicia KeysAnastaciaAshantiAriana GrandeBeyoncéBlack Eyed Peas
Bandhiga koonfur galbeed waa xaflad muusik ah oo sannad walba ka dhacda koonfurta Jarmalka oo u dhaw Tuttlingen. Waxaa jira kooxo kale oo isku dhafan oo ku dheggan, qaybo badan oo ka mid ah barnaamijku wuxuu ka kooban yahay kooxo gudaha ah. Isku-gudbinta noolaha ee riwaayadaha shakhsiga ah ayaa mas'uul ka ah kanaalka VIVA, MTV Jarmalka. Bandhiga heesaha waxaa lagu magacaabaa Hurricane, oo lagu qabtay isla mudada waqooyiga Jarmalka ilaa 1973. Barnaamijku wuxuu ahaa mid isku mid ah koonfur-galbeed sannadihii ugu dambeeyay, oo keliya waqtiyo muujin.
Diiwaangelinta Muusikada NZ (RMNZ), oo hore u ahayd Ururka Warshadaha Kaydinta ee New Zealand (RIANZ), waa urur ganacsi oo aan faa'iido doon ahayn oo wadaagaya daabacadaha muusikada iyo qaybiyayaal ee New Zealand. Xubinimadu waxay heli kartaa dhamaan daabacayaasha muusikada ee ka shaqeeya wadankan.
Justin Randall Timberlake (* 31 1981. January Memphis, Tennessee, USA) waa gabayaa ah American iyo actor, sagaal jeer GRAMMY Award-winning iyo afarta jeer Emmy Award guusha Awards.Do ka mid ah dhagaystayaasha helay caanka ah sida xubin ka mid ah band wiilka 'N nidaameed. 2002 wuxuu sii daayay albaabkii ugu horeeyay ee loo yaqaan 'Justified', kaas oo iibiyay wax ka badan 7 million nuqul oo dunida ah. album Timberlakovo labaad FutureSex / LoveSounds la sii daayay bishii September 2006 iyo saddex songs ka guddiga kaalinta ugu horeysay boor Hot 100. Waxa kale oo uu aasaasay shirkaddiisa duubista, Tenman Records, iyo William Rast.
Magaca rasmiga ah waa Festival of Songs Talyaani (Festival della canzone italiana). Waxaa sanad kasta la qabtaa ilaa 1951 oo ku yaalla magaalada isboortiga ee Sanremo, Liguria. Sanadihii ugu horreeyay ayaa la baahiyay tan iyo markii 1955 uu ahaa telefishan. Bandhigaasi wuxuu ahaa waxyi loo hirgeliyay tartanka Eurovision.
Unbroken waa albaabka sadexaad ee muusikada American ah iyo heesta Demi Lovato. Albaabka waxaa la sii daayay 20. September 2011 Xogta Hollywoodka. Demi waxay iskaashi la samaysay kala duwanayaal iyo qorayaal sida Toby Gad, Rock Mafia, Timbaland, Dreamlab, iyo kuwo kale. Mawduucyada lyrical ee albumka ayaa si aad ah u saameeyay dhibaatooyinka shucuureed ee la sii daayay dhamaadkii sanadka markii 2010 loo soo diray bogsiin. Waxay timid ka dib markii uu la murmay riwaayad ay la socotay Jonas Brothers markii Demi u timid iyada. Albaabka waxaa saameyn ku leh muusikada muusikada iyo heesaha magaalooyinka sida Rihanna iyo Nelly Furtado.
December waa 336. maalin ee sannadka ee kaalendarka Gregorian (337. sannaddii boodboodi a). By dhamaadka sanadka weli 29 dní.UdálostiČesko1805 - Wars Napoleonic: ciidan Faransiis hogaaminayo Emperor Napoleon aqlabiyad ciidankiisii ​​oo Russo-Austria ee Battle of Slavkova.1848 - Olomouc casishay Austria Emperor Ferdinand I. Boqortooyada cusub noqday siddeed iyo markii Ferdinand ayaa adeer Franz Joseph I. oo markaas meesha ka jiraan siddeed iyo lixdan sannadood.
Qodobbada waa shaqo farshaxan ama cilmi ah oo qof aan ahayn ogeeysiis dhab ah oo aan sax ahayn sheegayo inuu isagu yahay. hawlaha noocan oo kale ah waxaa loo yaqaan plagiace ama Qishka ama Act plagiátorství.Definice Czech Copyright - ka duwan tusaale ahaan in Jarmal - fikradda ah Qishka uusan iyo ma qeexo heerka caalami ee caadiga ah ISO 5127-2003 ku tilmaamay "muujinaya shaqada maskaxda ee qoraaga kale, amaahatay ama Keeban gebi ahaan ama qayb ahaan, sida adiga kuu gaar ah ". ilaalinta u dhaqmaan shuqullada farshaxanka iyo sayniska, "taas oo ay sabab u gaar ah hawlaha hal abuur leh" haddii la bartey ujeeddo hadlayay, laakiin sidoo kale barnaamijka turjumaad, database, iyo wixii la mid ah. Sharciga Copyright The si cad u sheegayaa in ku xiran tahay ilaalinta sharciga - iyo sidaas plagiace no - ma ah "theme gaar ah oo shaqada laftiisa, warbixinta maalin kasta ama tilmaan kale oo iniinahoodu ku dhex jiraan, fikrad, nidaamka, Mabda, habka, helitaanka, aragti cilmiyeed oo la mid ah formula, shaxanka tirakoobka, iyo wixii la mid ah. "